Dibadbax loogaga soo horjeedo falalka kooxaha burcada oo Göteborg lugu qabtay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dibadbax loogaga soo horjeedo falalka kooxaha burcada oo Göteborg lugu qabtay
Banaanbaxan oo ay soo qaban qaabiyeen urruro iyo shabakado isbiirsaday oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee bulshadda. Banaanbaxan ayaa ujeedadiisa waxaa uu ahaa mid lugu taageerayo deganaan iyo ammni in ay ka jiraan magaaladda Göteborg gaar ahaan xaafadda ajaanibtu ku badan tahay.
Wuxuu sidoo kale ahaa mid lugu baroordiiqayo dadyowgii sida kala duwan ugu dhintay falalka ay geeystaan kooxaha kiriminaalka ah. Siyaasiinta gobolka iyo urruradda u dhaqaaqa ajaanibta oo maanta ka qeyb galay ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday urruro iyo siyaasiin soomaali ah.
Kuwaas oo qudhooda door weyn oo muuqda kaga jira siddii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka xagga is dhexgalka iyo suuqa shaqada ka heeysta soomaalida.